अभ्यासहरू उद्देश्य विनिर्माण प्रशिक्षण को दीर्घकालीन सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम सुरक्षित उद्देश्य। भविष्यमा पेशा बारेमा नयाँ जानकारी प्राप्त गर्दा विद्यार्थीहरू, कौशल को आवेदन मा आफ्नो पहिलो अनुभव प्राप्त गर्नुहोस्। तर प्रयोग प्रविधी को एक ज्ञान छैन गुणस्तर शिक्षा पक्का हुन पर्याप्त छ।
किन संगठन मा अभ्यास छ?
उद्देश्य विनिर्माण अभ्यास कुनै पनि त्यहि हो प्रशिक्षण को प्रकार। पहिले अध्ययन सामाग्री संग प्राप्त अनुभव तुलना प्रक्रियाहरू यस समझ, - विनिर्माण प्रक्रियामा सहभागिता बाट मुख्य परिणाम अपेक्षित। विद्यार्थी एक अनुभवी विशेषज्ञ को निर्देशन अन्तर्गत आफ्नो हात प्रयास गर्न मौका प्राप्त।
अभ्यासहरू उद्देश्य विनिर्माण उत्पादन मा कक्षाहरू, वित्तीय क्षेत्र, कानुनी कागजात व्यवस्थापन, सिलाई कार्यशाला को अन्त मा हासिल। जहाँ एक विद्यार्थी न त आफूलाई प्रमाणित गर्ने प्रयास हुनेछ, संगठन वा शिक्षा को प्रोफाइल अनुसार उत्पादन मा अभ्यास भावी साक्षात्कार लागि राम्रो तयारी छ। यसको आफ्नै अनुसन्धानहरूले को परिणाम अनुसार विद्यार्थी आफ्नो भविष्य दायित्व को एक सामान्य विचार परिवर्तन।
केही जवानहरूले अक्सर कलाकार को भूमिका सिधै उनीहरूको क्षमता जाँच पछि गतिविधिको चुनिएको क्षेत्रमा चासो गुमाउन। तर सकारात्मक उद्देश्य विनिर्माण अभ्यास छ: तपाईं अझै पनि रोजगार गर्न विशेषज्ञता परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
अपेक्षित काम परिणाम
लक्ष्य लिएको छ र उत्पादन अभ्यास को उद्देश्य संस्था नेताहरू परिभाषित। प्रमुख सीधा तयार कार्यक्रम नेताहरूसित परामर्श मा अध्ययन को आफ्नै विचार पूरक सक्नुहुन्छ को उत्पादन मा लगे। तर, गतिविधिहरु को विशेषताहरू चुनिएको विशेषज्ञता यकिन र सैद्धान्तिक दर गर्न यात्रा गर्नुपर्छ।
चयन लक्ष्य र संस्थाले को टाउको द्वारा हस्ताक्षर एउटा सरकारी कागजातमा दस्तावेज उत्पादन अभ्यासहरू र संगठन मा अभ्यास नेतृत्व गर्नेहरूको उद्देश्य। सारा मार्ग धेरै क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। विद्यार्थी एक निश्चित समय तालिका मा कम्पनी धाउन बाध्य छन्। पाठ्यक्रम को अन्त मा अभ्यास को स्थान मा स्थापित ढाँचामा भर्याङ (परीक्षा) पारित हुनेछ। यसलाई आफ्नो कर्मचारी संगठन लाग्छ।
परिणाम एक विद्यार्थी छ?
व्यावहारिक प्रशिक्षण को मुख्य लक्ष्य - एक विशेषज्ञ द्वारा उत्पादित स्तर उठाउनु छ। संस्थाले आकलन र जवान, स्वतन्त्र निर्णय बनाउने गर्न accustomed को विश्लेषणात्मक क्षमता विकास गर्न मौका प्रदान गर्दछ। साथै, विद्यार्थी आफैलाई लागि उपयोगी समारोह कार्य: अवस्थित तंत्र र उत्पादन प्रविधी को कामकाज स्ट्रीमलाइन तरिकाहरू खोजीहरू। काम प्रदर्शन गर्ने मा रिपोर्ट उत्पादन को सुधार को लागि प्रस्ताव प्रदान गर्न आवश्यक छ।
काम आपसी बाहिर: एक सिकाइएको छ, र बाद यो अनुसन्धान को परिणाम मा कम्पनी मदत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। को प्रस्ताव को समीक्षा कहिलेकाहीं यो उपकरण को विद्यमान कमीकमजोरी उन्मूलन बाहिर जान्छ मा, उत्पादन प्रक्रिया सुधार उत्पादन गुणस्तर सुधार। एकै समयमा यो संगठन को विकास को तरिका प्रतिज्ञा गर्नुभएको एक मोडेल उन्नति गराउँछ।
संस्था को ब्याज के हो?
जो फाइदाको वैज्ञानिक संसारमा आधारमा उत्पादन को विकास को नयाँ तरिका, फेला पार्न - कम्पनी मा व्यावहारिक प्रशिक्षण को उद्देश्य। संस्थाहरू अध्ययन आफ्नो क्षेत्रमा उच्चतम मूल्यांकन कब्जा गर्न खोजिरहेका छन्। के पेशेवरों गुणस्तर शिक्षा भन्दा यो राम्रो मदत गर्न सक्छ? विद्यार्थीहरूको व्यावहारिक गतिविधिहरु अक्सर प्रस्ताव गुणस्तर मा अद्वितीय र समसामयिक छन् कि स्नातक परियोजनाहरू मार्फत सम्पूर्ण उद्योग विकास गर्न मदत।
को उपाधि प्रमाणीकरण साथ विद्यार्थी रोजगारीको प्रस्ताव पाउँदा को सकारात्मक उदाहरणहरू छन्, र कार्यान्वयन अनुसन्धान श्रम को लेखक सामाग्री भुक्तानी व्यय गर्न ल्याए। व्यावहारिक रिपोर्ट को आधारमा धेरै विद्यार्थी स्नातक स्कूल थप अध्ययनको लागि स्वीकार गरेका थिए।
म उपाधि रिपोर्ट गरेको छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
को उपाधि लागि तयार - अभ्यासहरू निर्माण को लक्ष्य छ। यसको कार्यान्वयनको रिपोर्ट भाग बुझे छ? छैन आवश्यक। विद्यार्थीलाई आफ्नो अनुसन्धान मा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ थियोसिस परियोजना, पहिले नै पुगिसकेको छ जो जारी लागि तयार को 1/3 अन्तिम कार्य। तर तल लाइन रिपोर्ट पूरा गर्न सकिँदैन, र एक उपाधि फरक विषय मा चलाउनुहोस्।
सधैं थियोसिस र व्यावहारिक प्रशिक्षण को विषय संयोजन गर्न काम गर्दैन। यो उद्यम मा स्थानहरूको संख्या सधैं सीमित छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा जटिल छ। यो चासो निर्देशन चयन गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यसैले परिणाम थप पूरा हुनेछ, र गरेका काम उत्प्रेरित र sated गरिनेछ।
प्रशिक्षण को प्रभाव सुधार गर्ने
कार्य अन्तिम काम अवसर गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न व्यावहारिक प्रशिक्षण समावेश गर्नुहोस्। विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण को छोटो अवधिमा अधिकतम परिणाम प्राप्त जो मार्फत निरन्तर प्रशिक्षण सुधार गर्ने विचार गर्नुहोस्:
गतिविधिहरु समुदाय को सामाजिक जीवन मा काम को महत्व मा चयन गरिएको छैन।
प्रशिक्षण सर्तहरू प्रशिक्षुओं निर्मित उत्पादनहरु लागि जिम्मेवारी स्थापना प्रदान गर्नुहोस्। यो उपाय परिणाम सुधार गर्न र अनुसन्धान को उत्पादन प्रक्रियामा विद्यार्थी संलग्नता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ।
यो प्रशिक्षार्थी रचनात्मकता र अन्य क्षमता को प्रकटीकरण रुचि आवश्यक छ।
कक्षाहरू सामूहिक हुनुपर्छ। यो सम्भव सहकर्मीसँग अनुभव तुलना गरेर हासिल परिणाम मूल्याङ्कन बनाउँछ।
नियम र अभ्यास को अवस्था वास्तविक तालिका विचार गर्नुपर्छ।
व्यावहारिक प्रशिक्षण को उद्देश्य मात्र होइन सीप प्राप्त गर्न अन्तिम उत्पादन को दैनिक दस्तावेज पूरा दर्ता, वार्ता को प्रक्रियाहरु संग निर्माण, तर पनि familiarity समावेश छ। यो चरण मा, औद्योगिक भवन को स्थान संग familiarity, विद्यार्थी पर्यवेक्षकों छन्। अर्को उत्पादन र मानव संसाधन मा अवस्थित समस्या voiced।
विद्यार्थी काममा कसरी बोनस जानकारी ल्याउन, बोनस प्रस्ताव सुझावहरू प्राप्त गर्न शो तरिका। हेर्न प्रणाली कर्मचारीहरु को प्रेरणा, आफ्नो आवधिक पुन तालिम प्रदर्शन कसरी बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। कम्पनी मा वृद्धि को बाटो र आफ्नो कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्धारण।
व्यक्तिगत र सामूहिक - यो उल्लंघन दायित्व को प्रशिक्षुओं तरिका को समझ गर्न ल्याउन महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो व्यक्तिगत लापरवाही वा जानाजानी लापरवाह आचरण को परिणाम हो। दोस्रो भएको सहयोगिहरु गल्ती गर्न inattention को परिणाम, कम्पनी सम्पत्ति डाउनटाइम वा क्षति कारण घाटा फलस्वरूप भोगे हुँदा आउँछ।
सीधा काम संलग्न
यहाँ विद्यार्थी उत्पादन मा वास्तविक समस्या सामना गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले समाधान को लागि देख, नतिजा संकेतक को सुधार प्रभावित गर्न सक्छन् कसरी कागज मा आफ्नै अवलोकन रेकर्ड बुझ्छु। अभ्यास दौरान, जो पनि सामूहिक काम को परिणाम असर गर्छ, सहकर्मी बीच सम्बन्ध समस्या समाधान।
विद्यार्थीहरूले नियमहरु र आन्तरिक नियम परिचित मैनुअल प्रदान गरिन्छ। कार्यस्थल मा, विद्यार्थी एक प्रशिक्षक को पर्यवेक्षण अन्तर्गत पहिलो काम, र त्यसपछि गर्न जिम्मेवारी एक स्वतन्त्र प्रदर्शन पूरा गर्न थाल्छन्। यो बिन्दुबाट त्यहाँ विवाह गर्न अनुमति दिने लागि जिम्मेवारी हो।
प्रशिक्षण को पूरा
यो प्राप्त ज्ञान विद्यार्थीहरूलाई संगठित गर्न र विद्यमान समस्याहरूको समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ। रिपोर्ट व्यवहार सबै चरणमा मा विस्तृत जानकारी शुरू। आर्थिक जायज र उद्यम लागि कुनै पनि लाभ entailing - प्रस्ताव विकास।
एक विद्यार्थी प्रस्तावित सामाग्री साँच्चै मूल्यवान् थियो, र एक दुर्लभ नेता क्यापिटलाइज संगठन मदत यदि यस्तो प्रशिक्षुओं प्रोत्साहन मना गर्यो। उपयोगी सामूहिक अनुसन्धान दोहन समाधान फेला गर्दा। यस्तो भन्छिन् विमर्श प्रविधी, वा टी समूह। एक वा दुई प्रमुख उत्पादन समस्या मा प्रस्ताव बनाउन प्रयास अन्तिम काम। यो इन्टरनेट वा मुद्रित साहित्य देखि समकालीन स्रोतहरू प्रयोग संग अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ मनमोहक छ।
जर्मनी को जुवा देखि स्वतन्त्रता को लागि एक उपकरण रूपमा पोलिस पैसा
ओडेसा, "मोमबत्ती" - समुद्र तट मा रेस्टुरेन्ट। वर्णन, मेनु, मूल्यहरू
कोरी हेम 80 को मूर्ति हो। ताराको जीवन र रचनात्मकता
बीमा OSAGO इलेक्ट्रोनिक: कहां र कसरी आवेदन गर्ने?
ल्याप्टप लागि कूलर के छ र यसको लागि के हो?
Chusovskoye ताल। को पर्म क्षेत्रमा मत्स्य पालन
कसरी नक्सामा "WebMoney" बाट पैसा हस्तान्तरण गर्न: पुस्तिका